အကျင့်ဆိုး -ရွှေတိုင်ညွန့် | Ma Shwe Mi
Entry filed under: သီချင်းများ, Sharing.
ပိုစွဲလမ်းရတဲ့သူ ကိုယ်ပဲဖြစ်ပါရစေ	A sketch of Bilat Pyan Than , from “Perfect Hostage”
1. Dr.Nay Oo | May 5, 2011 at 1:34 am
“နည်းလမ်းအပိုတွေ စည်းကမ်းမရှိလေ ရက်တွေကုန်ခဲ့တယ်” စာသား မှားနေတယ်။
`“နည်းလမ်းအပိုတွေ စည်းကမ်းမရိုသေ ရက်တွေကုန်ခဲ့တယ်”
သီချင်းနားထောင်နိုင်မယ့် Link က ဒီမှာပါ။
2. Ma Shwe Mi | May 5, 2011 at 3:21 pm
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်။ စာသားကိုလဲပြင်လိုက်ပါပြီ။ သီချင်းကိုလဲ လင့်ခ်ထည့်ပေးထားပါတယ်ရှင်။